Abavelisi beMbaleki yenja I-QQpets
Ikhaya > Iimveliso > Iimveliso ze-Qqpets > Inja ekhulayo inja
Eyona nto ibalulekileyo yenja Umzi-mveliso, inja engafezekanga i-leash ngqo enezixhobo ezisemgangathweni kunye nexabiso lokhuphiswano. Kulungele ukuba abanini bahambe nezinja ngaphandle kokulandela inyathelo ngenyathelo. Eyona inja inqabileyo yenja yimitha yeemitha ezi-4 ubude kunye neqhosha elingenasiseko kunye nesingatha. Abanini banokulawula iqhosha ukuze bagcine izinja ezibangqongileyo kwaye bazikhusele.
Izibonelelo zoncedo lwenja endelekileyo kukuba iyaguquguquka kwaye ilula ukusebenzisana, iibhuleki ngokukhawuleza, kwaye inezixhobo ezilungileyo kakhulu; Iqokobhe lenziwa ngezinto eziqinileyo zeplasitiki, ekungekho lula ukwaphula, kwaye kulula ukuzicoca; Kwakhona, eyona nja inqabileyo yenja inokunika i-PET isithuba esaneleyo sentshukumo, njl njl. Qqpets inobungcali kakhulu ekwenzeni imbumbulu yenja.
Inja ehlawulelwayo ikhokelela: i-rictor ngqo ye-nylon i-nylon i-nylon i-qqpets-qqpets
I-Guangzhou qiaqaqi ye-qiaqian ye-qiaqian conqian., Ltd. ifunyenwe ngo-2005. Ifumaneka ngo-2005. Ngumzi mveliso odumileyo ngqo eTshayina. Inkampani yethu inobuchule obunzulu kunye namava. Sizinikela ekuyileni, ukuvelisa kunye neentlobo zemveliso yeemveliso zezilwanyana. Njengabanjengeenja, imihlaba yenja, ii-hardies zenja njalo njalo njalo. Eyona Ndwengi yenu nonke, eyona mveliso yezilwanyana zasekhaya. Wamkelekile ukutyelela umzi-mveliso wethu.
I-leash yezilwanyana zasekhaya I-QQpets
I-leash encinci ye-Pet Speest i-Pet esenzelwe izinja zoqeqesho ngaphandle kokulandela amanyathelo ngamanyathelo. I-fit's elungele ukulawula ubude.Ukuba unombono, nxibelelana nathi ukufumana ulwazi oluthe kratya.
Inja yenja ye-auto: i-hite wirt nylon nylon i-leash ye-pet | I-QQpets
Izibonelelo eziphambili: Ukuhamba izinja ngaphandle kwenyathelo ngenyathelo Iqhosha elizenzekelayo lokulawula ubude benja Kulula ukusebenza ngeqhosha elinye. Sinemibala emihlanu yokukhetha, kwaye inokulungelelaniswa ilogo kunye nombala uyathanda.
I-OEM&I-ODM yamkelekile.UGgungzhou qiaqian Pe., Ltd. ifunyenwe ngo-2005. Ifumaneka ngo-2005. Ifumaneka ngo-2005. Ifumaneka ngo-2005. Njengomzi mveliso owaziwayo eTshayina, inkampani yethu inengcali kunye namava. Sizinikela ekuyileni, imveliso kwaye sithengise zonke iintlobo zeemveliso zasekhaya. Injenge-Pet Collar kunye ne-leash, i-harness ye-per, ikhola yenja, inja yenja, inja njl.njl.